Cunnada & Khamriga - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Fiberglass balaastigga lagu xoojiyay (FRP), adoo isticmaalaya resins oo loo ogolaaday taabashada cuntada, waxay ku habboon tahay kaydinta, halsano iyo falcelinta agabyo badan sida khamri, caano, maraqa soy, khal, biyo saafi ah, cuntada cuntada ee heerka ion, hydrochloric acid ee heerka cuntada, biyo-mareennada badda iyo nidaamka kaydinta, nidaamka gaadiidka badda, iwm.
Si loo sameeyo badeecada fiberlass-ka si ay ula jaanqaado cuntada iyo khamriga iyo biyaha saafiga ah, agabyada ceeriin ee la heli karo gaar ahaan kaydadka waa in horay loo sii cayimaa. Kadib kadib nidaamka caqliga suubban iyo daaweynta kadib, badeecada fiberlasslass waxaa loo isticmaali karaa warshadaha cuntada.
Jrain waxay u isticmaashaa biyo-soocyo si gaar ah loo xushay dhismaha haamaha iyo silos loogu talagay in lagu isticmaalo warshadaha cuntada. Kaydku waa FDA-oggolaatay oo sidaas awgeed way ku habboon yihiin adeegsiga warshadan. Si loo daboolo heerarka FDA, resins waxaa loo maraa imtixaan socdaal iyadoo la raacayo heerarka haatan loogu talagalay dareeraha iyo sidoo kale cuntada qalalan.
Sidaa daraadeed taangiyada muraayadaha indhaha ayaa si aad ah ugu habboon in lagu kaydiyo dhammaan noocyada cuntooyinka, oo ay ku jiraan cabitaanno ay ka mid yihiin biyo, maraqa soy, isteerminta istaarijka, brine, saliidaha iyo dufanka, iyo waxyaabaha adag sida bur, cusbo, sonkor, istaarijka, galley, kooko ama gluten , iyo sidoo kale warshadaha quudinta xoolaha, tusaale ahaan, keydinta badarka, badarka, alaabada soy, qamadiga, muraayadaha, cusbada, macdanta iyo waxyaabo kaloo badan.
Alaab-qeybiyeyaashayada had iyo jeer waa shirkado caan ah oo caalami ah:
Resin: Ashland, AOC Alyancys, Swancor Showa, iwm
Fiberglass: Jushi, Taishan, CIPC, Dongli, Jinniu, iwm.
Qalabka gargaarka: Akzonobel, iwm
Si si cad loogu daadiyo alaabada, sagxadda hoose ama qulqulka hoose waxaa dooran kara macmiil.
Alaabada 'fiberlass' ee warshadaha cuntada waxaa ku waajibay qawaaniinta xafiisyada cuntada iyo nadaafadda. Marka waa in qaabeynta, maareynta iyo kooxaha wax soo saarka ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan xallinta arrimaha oo dhan.
Tayada, adeegga iyo heerarka qiimaha wax ku oolka ah ayaa aasaas u ah booska adag ee suuqan.
Iyada oo ku saleysan khibradeena sanadaha badan ee adeega suuqa, Jrain waxay joogtaa meel ay ku abuurto naqshado tayo iyo waara.
Waxyaabaha FRP waxay leeyihiin faa'iidooyin badan sida soosocda
Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Dhoolatus gacmeed, Caaryada, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Fiberlass-ka Farsamaysan,